Hunting for Good Garbage to Eat
Submitted by AA Zimbabwe on Wed, 2008-11-05 23:31
Hunting for Good Garbage to Eat - Desperate entrepreneurs are scouring rubbish dumps, abattoirs and poisoned waterways for scraps of food to eat or sell to other equally hungry Zimbabweans in a bid for survival. [All Africa : Zimbabwe]
ZSE Shares Unstoppable
Submitted by AA Zimbabwe on Wed, 2008-11-05 23:30
ZSE Shares Unstoppable - SHARES on the Zimbabwe Stock Exchange are stopping at nothing, and last week fired on unhindered, as speculation, and the belief of hedging against inflation drove prices through the roof. [All Africa : Zimbabwe]
Crisis Management Needed for Water
Crisis Management Needed for Water - HARARE and Chitungwiza both have areas very short of water. [All Africa : Zimbabwe]
Disaster Unit Deployed in Response to Cholera Outbreak
Submitted by AA Zimbabwe on Wed, 2008-11-05 23:29
Disaster Unit Deployed in Response to Cholera Outbreak - Zimbabwe has activated its national disaster response agency, the Civil Protection Unit (CPU), to counter the spread of cholera. [All Africa : Zimbabwe]
Submitted by AA Zimbabwe on Wed, 2008-11-05 00:24
Where's the Global Fund Money? - Zimbabwe's AIDS organisations have condemned the government for failing to account for more than US$7 million provided by the Geneva-based Global Fund to Fight HIV/AIDS, Tuberculosis and Malaria. [All Africa : Zimbabwe]
Submitted by AA Zimbabwe on Wed, 2008-11-05 00:23
Teachers Unions Says Exams in Chaos As Chiefs & Militia Invigilate - The Progressive Teachers Union of Zimbabwe (PTUZ) has said chaos is characterising examinations across the country, as the industrial action by the majority of teachers continues. [All Africa : Zimbabwe]
Cholera Spreads in Harare Claiming More Lives
Cholera Spreads in Harare Claiming More Lives - Cholera hotspots are multiplying in several areas of the capital, amid reports that at least 20 people died last week of the disease in Budiriro, west of the city. [All Africa : Zimbabwe]